hure - Nyambo dzino kodza mwoyo
Nyambo dzine tag 'hure'
hure huku sheshe jongwe
hure mukadzi murume
Nhaimi ipotatoes here iri
Yakatambika nezuro. This reputable brother nicknamed Bandamukonde aibva kuchapel nema sisters ari bho-o. Kwabva kwauya vamwe sisi vekutsvaka mari nenhengo iya yemuviri ( yamunoda nemiwo). Vakabva vasviko bata tarauzi ra Bandeki nechepano pamusana vakati ndipe mari yangu.
Masister havana kukurumidza kufungira zvakaipa sezvo Bandeki ari munhu anoremekedzwa. Saka vakado kuzoziva kuti ko yaimbova mari yei. Bandeki ndokukurumidza kupindura achiti "haa akanditengesera mapotatoes".
Maiwee akabva aburana nasisi vaye. Nechinguva chisina kufanira vakaratidza
nengo iya kumunhu wose zvikanzi "Nhaimi ipotatoes here iri?
Imwe shasha yakatorana navamwe amai vakanga vakatakura kungevarikutama ari magaro avo vega, saka vaakuseenza basa repabonde amai vaya vakabva vatanga kusheedzera kuti cremooora!!!, muchinda achibva awedzera speed achifunga kuti gero ririkunakigwa ,vapedza zvavo first round muface akabva abunza kuti ko pawanga uchiti cremora wanga uchirevei, gero rikati ndanga ndichireva kuti "it's not inside it's on top"
hure adult hiv/aids chirongwa
hure aids rufu hiv/aids mbuya
hure mudzidzisi chikoro baba mwana mai headmaster
hure adult aids hiv/aids chirongwa
hure mukadzi adult kombi murume bhawa
hure dhongi imbwa
hure mukadzi murume small house Macheso
hure baba mwana mai varoyi
hure mbavha imbwa kukara murombo kiti
Mbavha, muroyi, pfambi
Mbavha yakaroora muroyi ndokuzvara pfambi, zvino chakunetsa ndechekuti vakushaya wekusiya pamba manheru. Pliz tipeiwo mazano tivabatsire varikuda kutobuda izvozvi.
hure mbavha muroyi pfambi
hure ambuya mwana muroora
hure mukadzi murume muchato
hure mukwasha tezvara muroora
Pane chanhuwa pano
Mahure airukana musoro, rimwe ndokuti, 'Asikana pano panhuwa mboro'
Rimwe ndokudaira richiti, 'Sorry zvenyu asikana ndini ndadzvova'
Nhamo akati achiyamwa mazamu ehure rake ndokunzwa ave kutomedza mukaka ndobva abvunza:
"Ko nhai babie asi unoyamwisa mwana mucheche kani? "
Hure ndokupindura, "aiwa daddy ndine zimota pazamu iroro saka ndofunga matorisvina."
hure aids mota
hure doro bhawa jairos jiri chimumumu
hure chikomba chihera
Zvinombofamba sei nhai vavakidzani?
Zvinombo famba sei?
Musi wauno pinda ne hure mumba, vavakidzani vanokuona.
Asi musi wauno birwa nembava, hapana anozviona sei?
hure mbavha next door
hure adult chikomba
hure mari reserve bank of zimbabwe bond notes
hure dhongi imbwa munhu
hure chikomba small house
afcon 2017 - huree
Tanga tichiona hadu bhora,Pagowesa vakomana veku ghana mkadzi bvaadaidzira kuti HUREEE landlord kwakuuya achimhanya ndokusviko knocker pa door zvikanzi mamisai munhu chokwadi anogara achiuya pano musipo munhu iyeye ndaitoshaya kuti ndokuudzai sei
hure bhora roja landlord afcon 2017 afcon (gabon 2017)
Mhuri ye mbavha, muroyi nepfambi
Mbavha yakaroora muroyi ndokuzvara pfambi, zvino chakunetsa ndechekuti vakushaya wekusiya pamba manheru.
Pliz tipeiwo mazano tivabatsire varikuda kutobuda izvozvi.
hure chikomba mushonga wemakonzo
hure huku nyama samutoko
hure bhawa kereke
kupanana mazano pa whatsapp
[05/12, 19:50] Quick answer before i get home guys! How do you remove face powder stains from a white shirt without using water?😓
[05/12, 19:50] Ingotenga mapotato wongopinda mumba wakaatakura
hure mukadzi hondo kupfupika
jambanja kuma kuva